ဖမ်းထားသည့် သစ်ဖောင်ခိုးလာသူ အမျိုးသမီးအား ဖမ်းဆီးစဉ် ဓားရှည်ကိုင်ကာ ရန်ပြုသဖြင့် ရေလယ်ကေ - Yangon Media Group
ဖမ်းထားသည့် သစ်ဖောင်ခိုးလာသူ အမျိုးသမီးအား ဖမ်းဆီးစဉ် ဓားရှည်ကိုင်ကာ ရန်ပြုသဖြင့် ရေလယ်ကေ
မုံရွာခရိုင် ဘုတလင်မြို့နယ်ရှိ ချင်းတွင်း မြစ်အတွင်းမှ ဖမ်းဆီးထားသည့် သစ်ဖောင်အား အမျိုးသမီးတစ်ဦး ခိုးယူစုန်ဆင်းလာစဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်း မုံရွာ မြို့မရဲစခန်းမှ သိရသည်။ ဇွန် ၃ဝ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းက ဘုတလင် မြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သစ်ဖောင်များအား ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်းမှ ဖမ်းဆီး၍ သစ် တောရုံး၌ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရန် မြစ်ကမ်း နံဘေးတွင် ဆိုက်ကပ်ချည်နှောင်ထားခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုသည်။
၎င်းသစ်ဖောင်အား ဖြုတ်၍ ချင်းတွင်း မြစ်အတိုင်း စုန်ဆင်းသွားခဲ့သဖြင့် စောင့်ဆိုင်း ဖမ်းဆီးပေးရန် ဘုတလင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အကြောင်း ကြားလာသဖြင့် ဘုတလင်အောက်ဘက် အလုံအနီး ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်း ရေလယ်ကောင်တွင် မော်တော်ဖြင့် သွားရောက်စောင့်ဆိုင်း နေခဲ့ရကြောင်း အလုံရဲကင်းစခန်းမှ ဒုရဲအုပ် မင်းမင်းထွန်းက ပြောသည်။ ”ဖမ်းထားတဲ့ ဖောင်တစ်စင်း ခိုးစုန်သွားတယ်။ စောင့်ဖမ်းပေးပါဆိုလို့ မော်တော်နဲ့ သွား စောင့်နေခဲ့ရတယ်။ ဖောင်ပေါ်မှာ ဘယ်သူပါမယ်၊ ဘယ်ဝါပါမယ်တော့ မသိရသေးတော့ ကျွန်တော်တို့လဲ ရဲအင်အားအပြည့်နဲ့ စောင့်နေခဲ့တယ်။ ဖောင်ကိုတွေ့လို့ ဖောင်နားကပ်သွား တော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲ တွေ့ရပြီး သူ့လက်ထဲမှာလဲ ဓားရှည်နဲ့ဗျ။ သူက အနားကပ်မလာနဲ့ လာရင် လာတဲ့သူလဲခုတ်မှာ သူ့ကိုယ်သူလဲ သတ်သေမှာလို့ပဲ ပြောနေတော့တာ”ဟု ဒုရဲအုပ်မင်းမင်းထွန်းက ပြောသည်။
အဆိုပါအမျိုးသမီးအား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ချော့မော့ပြီး ဓားချရန်နှင့် တရားဥပဒေအတိုင်း ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် ပြောဆိုနေစဉ်အတွင်း ယင်းကိုင်ဆောင်ထားသည့်ဓားရှည်ဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ကို ရန်မူခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လောက်လေးခွဖြင့် ပစ်ခတ်မည်ဟု ချိန်ရွယ်ကာ ခြောက်လှန့်ပစ်ခတ်လိုက်စဉ် ဓားချသွားချိန်ရောက်မှ အမျိုးသမီးရဲမေ ဖြင့် လုံးထွေးဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းအရာရှိက ဆက်ပြောသည်။ လက်ရှိ အဆိုပါအမျိုးသမီး ဖြုတ်ယူစုန် ဆင်းခဲ့သည့်သစ်ဖောင်မှာ ၎င်းတို့၏သစ်ဖောင် ဖြစ်ပြီး ဘုတလင်မြို့နယ် ရွှေစာရေးကျေးရွာအနီး ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်းတွင် သစ်တောအဖွဲ့မှ ဇွန် ၃ဝ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းက ဖမ်းဆီး ခြင်းခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆိုသည်။
အမျိုးသမီးမှာ ၎င်းတို့ဖောင်များကို သစ် တောအဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးလိုက်၍ ဘဝပျက်သွား ပြီဟု တွေးထင်လျက် ယခုကဲ့သို့လုပ်ဆောင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့၏ စစ်ဆေးချက်အရ သိရသည်။ မုံရွာမြို့ ဘောဂဗလကျေးရွာတွင် နေထိုင် သည့် ၃၂ နှစ်အရွယ်ရှိ အဆိုပါအမျိုးသမီးအား သစ်တောဥပဒေများဖြင့် ဘုတလင်မြို့ ရဲစခန်းတွင် အမှုရေးဖွင့်ကာ အာမခံဖြင့် နေထိုင် နေစဉ် ယခုလို ပြစ်မှုထပ်မံကျူးလွန်ခြင်းဖြစ် ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုသည်။ ယင်းအမျိုးသမီးအား ဒုရဲအုပ်မင်းမင်းထွန်းက တရားလိုပြုလုပ်တိုင်တန်းကာ ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင် မုံရွာမြို့မရဲစခန်းက (ပ)၁ဝဝ၆/ ၂ဝ၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၅၃၊ တာဝန်ဝတ္တရားနှောင့်ယှက်မှု ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၁၉(င) ဓားကိုင်ဆောင်မှုများဖြင့် အသီးသီးထပ်မံရေးဖွင့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလှသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီ၏ နှစ်(၃ဝ)ခရီးကို သမင်လည်ပြန် ရှုမြ?
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း သိမ်းဆည်းခံမြေများမှ ၉၃၇၉ ဧကကို ဒီဇင်ဘာလ မကုန်မီ ပြန်လည်ပေးအပ??
‘ကိုယ့် Band နဲ့ ကိုယ့်အဖွဲ့သား အဆိုတော်တွေ ပေါင်းပြီးတော့ သီချင်းတွေဆိုချင်တာ ကျွန်တော့်အိပ်
ဗိုလ်တထောင် စေတီအနီးတွင် တည်ဆောက်နေသည့် လူကူး ခုံးကျော်တံတားကို စက်တင်ဘာလအတွင်း အပြီး တည်?
ဂျက်မာက အင်ဒိုနီးရှားတွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ် တည်ထောင်မည် ဟုဆို
ဖီဖာဥက္ကဋ္ဌ အင်ဖာတီနိုအပေါ်စွပ်စွဲချက်များအား ဖီဖာမှ တရားဝင် ငြင်းချက်ထုတ်ပြန်
ဒဏ်ရာကြောင့် ဘယ်လ်ဂျီယံ လူစာရင်းမှ ကော်တွိုက်စ် ထွက်ခွာ